Masjidka Xaramka oo lagu khatimay Qur’aanka Kariimka. - Wargeyska Faafiye
Masjidka Xaramka oo lagu khatimay Qur’aanka Kariimka.
In ka badan hal milyan oo qof, ayaa xalay bisha Ramadaan 29-tan aheyd kaga qeyb galay khatimka Qur’aanka Kariimka ee Masjidka Xaramka ee magaalada Maka Almukaram,
Sida ay soo warisay Wakaaladda Wararka Islaamka ee Iina, Masjidka Xaramka ayaa xalay ahaa mid ay camireen muslimiin badan oo Salaada Cishaha iyo Taraaxida ku Dukaday , kadibna dwaawaday xafladda loo sameeyay ka khatimka Qur’aanka oo lagu sagootinayay bisha Ramadaanka Kariimka.
Imaamka iyo khadiimka Masjidka Maka Al-mukaram Sheekh C/raxmaan Al-sudiis, ayaa munaasabadaa lagu khatimayay akhriska Qur’aanka, ugu duceeyay muslimiinta meel kasta ay joogaanba. inuu ilaahey ajir ka siyo fadliga soonka bisha Ramadaan iyo inuu ilaahey islaamka ka fogeeyo wax kasta oo xumaan ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsAl-Shabaab vows to retake Somali townsMaraykanka: Waa Soo Dhaweenaynaa Dadaalka Madaxweyne Xassan Maxamuud.Meles Zenawi's Widow Refuses To Vacate State House.Somalia Signs Oil Exploration Deal With UK Firm.Innocence Of Muslims Filmmaker Nakoula Basseley Nakoula Taken In For Interviewing.